Gịnị bụ nku nke gị Marketing Strategy? | Martech Zone
Satọde, 1 Juun 2013 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Nyaahụ, amalitere m ịgụ akwụkwọ Nick Carter Sekọnd iri na abụọ: bulie Azụmaahịa Gị. M hụrụ n'anya ntụnyere nke a azụmahịa dị ka ụgbọ elu na akwụkwọ na Nick na-akọwa ya nke ọma.
Otu n'ime mkparịta ụka mbụ bụ bulie elu. NASA kọwara mbuli elu dị ka ndị a:
Mbuli bụ ikike na-emegide ibu arọ nke ụgbọ elu ma na-ejide ụgbọelu na ikuku. A na-ebuli elu site n'akụkụ ọ bụla nke ụgbọ elu ahụ, mana imirikiti mbuli elu na ụgbọelu kwesịrị ekwesị na-eme site na nku. Ebuli bụ ihe na-eme ka ikuku na-arụ ọrụ nke ụgbọelu na-eme site n'ikuku. N'ihi na mbuli bụ ike, ọ bụ ọnụọgụ ọkụ, nwere ma ịdị ukwuu ma nwee ntụzịaka metụtara ya. Ebuli na-eme site n'etiti nrụgide nke ihe ahụ ma na-eduzi n'akụkụ ya.
N’abalị ụnyaahụ, mụ na onye ọchụnta ego ọzọ nwere ụfọdụ mmanya ma anyị na-atụle ike na elekwasị anya anyị nwere na azụmaahịa anyị. Ulo oru anyi na eme nke oma, mana o were anyi ego di egwu. Echeghị m na onye ọ bụla ghọtara, ruo mgbe ha malitere azụmahịa, ihe ọ chọrọ. Site na-abanye n'ime ego, na-emesi ike banyere cashflow, na-arụ ọrụ mbipụta, ahịa, na-aza ajụjụ na ụtụ isi… folks adịghị aghọta na site na oge anyị n'ezie na-arụ ọrụ anyị na ndị ahịa ọ na-achọ ọ bụla ikpeazụ ounce nke ume.
Anyị ga-echekwa ike dị ka o kwere mee ka anyị wee nwee injin na-arụ ọrụ mgbe niile bulie elu. Enweghị ike ịdọrọ esemokwu na nsogbu ebe ọ bụ na nke ahụ na-eme ka ike karịa ike anyị. Chegodi elu elu ebe i tinyere oke mmanu iji ruo ebe ị na-aga… ị ga-ada. N'ihi ya, emeela m mkpebi na ngwa ngwa na nzaghachi na omume karịa n'oge gara aga.
inwego bụ ihe bụ isi nke ụgbọ elu na efe efe. Ka m na-ele azụmahịa m, na bulie elu of DK New Media bụ, n'enweghị obi abụọ, blog a. Ntọala nke blọọgụ a dugara ndị na-ege anyị ntị, akwụkwọ m, njikọta okwu m, ọrụ m na ụlọ ọrụ achụmnta ego na ụlọ ọrụ teknụzụ mba ụwa, na ịchụ ndị ọrụ anyị na ọrụ anyị na-aga n'ihu. Ọ bụrụ na enwere nku na azụmaahịa m, ha ga-abụ blog a.
Yabụ, n'agbanyeghị otu ụbọchị m nwere nsogbu, ike ole m mefuru, etu ọrụ m dị, ego ole dị n'ụlọ akụ na ihe ndị ahịa anyị nwere ike ịnwe, m na-ahụ na azụmahịa m nwere bulie elu. Amaara m na e nwere ọtụtụ nkọwa ndị ọzọ nke ụgbọ elu nke m ga-elebara anya (na akwụkwọ Nick na-enyere m aka ilekwasị anya na nke ahụ), mana agaghị m echezọ ntọala ọrụ anyị niile - blog a. Blog a enyela anyi ohere ife efe ga ewetara anyi ebe obula anyi choro. Naanị m ga-ahụrịrị na m na-agbanye injin ya ma nọgide na-eme ka anyị na-arịgo.
Kedu nku nke azụmahịa gị?
Jun 3, 2013 na 9:29 AM
Daalụ. nyere m ezigbo aka